Download Scottish Aviation Bulldog T. MK1 Mpanazatra FS2004 - Rikoooo
Raha tianao io fanampiana io FSX kitiho eto
Ity fiaramanidina dia manana FS feno fihetsik'ireo sary mihetsika. mamirapiratra textures sy ny Virtual Cockpit amin'ny fomba amam-panao sasany gauges. Anisan'izany RAF, Malta, ary soedoà loko tetika, Soedoà tetika manana ny SK-61 model.The Scottish Aviation Bulldog dia Britanika roa-seza lafiny-by-lafiny (tsy voatery fahatelo amin'ny seza) fiaramanidina fanofanana natao ny Beagle Aircraft ho toy ny B.125 Bulldog.
Ny Bulldog nitranga fahiny nanidina voalohany tamin'ny May 19 Shoreham 1969 amin'ny seranam-piaramanidina. Ny voalohany, mba ho ny karazana natao ho an'ny 78 avy amin'ny soedoà Air Board. Alohan'ny misy famokarana fiaramanidina no naorina, Beagle Aircraft nitsahatra varotra sy ny famokarana ny zo ho amin'ny fiaramanidina, ny soedoà mba, dia naka ny amin'ny Scottish Aviation (Bulldog) Limited. Fiaramanidina rehetra aty aoriana dia naorina tao Prestwick Airport amin'ny Scottish Aviation, na eo amin'ny taona tatỳ aoriana, Britanika mpahay siansa.